Fihaonana Voalohany Indrindra Ho an’ny GV Tiorka · Global Voices teny Malagasy
Fihaonana Voalohany Indrindra Ho an'ny GV Tiorka
Voadika ny 15 Jona 2019 14:56 GMT
Ekipan'ny mpandikateninay GV Tiorka
Taorian'ny fotoana lava be, nivoatra ny Lingua tiorka. Nila ezaka sy fotoana betsaka ny fananganana ny Lingua tany rehetra tany. Saika naverina nojeren'ny tranonkala Lingua avokoa ireo fandikana tao anaty WordPress, noforonina ireo kaontin'ny media sosialy ary tamin'ny volana lasa, vitanay ny nampiditra mpandikateny vaovao ho an'ny GV Türkçe. Tsy maintsy lazaiko fa tena hatsaram-panahy avy amin'i ElGohary ny fanampiany nandritra ireo dingana ireo satria marobe ireo fanontaniana napetrako taminy.
Sary iray teo am-panazavana ny tabilaon'ny vondrom-piarahamonina
Ny omalin'io, nikarakara fivoriana voalohany ho an'ny Lingua tiorka izahay niaraka tamin'ireo mpandikateny vaovao. Koa satria marobe tamin'ireo mpiara-miasa aminay no tsy nifankahalala sy tsy mahalala tsara ny GV, nataonay ho tanjona ny hahazo ny hevitry ny vondrom-piarahamoninay sy ireo fototry ny GV. Nanana atrikasa kely izahay izay niresahanay an'ireo hevitra fototra sasantsasany.
-GV 101: vaovao mikasika ny GV amin'ny ankapobeny, ao anatin'izany ny fototra, ny tantara sy ny ezaka nataon'ny GV hatramin'ny fiantombohany.
-Ireo tetikasa GV, miaraka amin'ny hevitra manodidina ny Lingua
-Ambangovangony iray mikasika ny fizotran'ny fandikanteny
-Fomba fampiasanay ny WordPress, fintina iray an'ny Wiki sy ireo torohevitra vitsivitsy mikasika ny fandikanteny
Avy eo, navelanay ny fombafomba ary nanomboka niady hevitra amin'ny ankapobeny izahay. Noresahanay ny fikatrohana nomerika ao Tiorkia, ny andraikitray ao anatin'ny asa fanaovana gazety amin'ny maha-mpandikateny, ireo zavatra tokony ataonay sy izay zavatra azonay atao, ary koa ireo lohahevitra hafa marobe tsy ankifidy.
Antenainay rehetra fa, miaraka amin'ny fotoana, hitondra tombontsoa marobe ny GV Türkçe.